नबिल ब्यालेन्स फण्डको ७३ करोड शेयरमा लगानी | गृहपृष्ठ
Home लगानी नबिल ब्यालेन्स फण्डको ७३ करोड शेयरमा लगानी
लगानी 75 views
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । नबिल म्युचुअल अन्तर्गत सञ्चालन हुने नबिल ब्यालेन्स फण्ड–१ ले माघ मसान्तमा रू. ७३ करोड ३० लाख शेयरमा लगानी गरेको छ । योजनाले सो रकम शेयर, ऋणपत्र र मुद्धती निक्षेपमा गरी लागनी गरेको हो ।
योजनाले माघमा गरेको शेयरको लगानी पुस मसान्तको तुलनामा रू. १० करोड ३३ लाखले कम हो । योजनाको माघ मसान्तमा प्रतिएकाई खुद मूल्य रू. १८ दशमलव शून्य ३ रहको छ । योजनाको प्राप्त भईनसकेको नोक्सानी रू. ३० करोड १६ लाख रहेको छ । योजनाको माघ मसान्तसम्म कुल नोक्सानी रू. १२ करोड ८८ लाख र बैङ्क मौज्दात रू. ६० करोड ५८ लाख रहेको छ ।
माघ मसान्तमा खुद सम्पति रू. १ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । ब्याज आम्दानी रू. १ करोड ८३ लाख, लाभांश आम्दानी रू. ५९ लाख ९९ हजार रहेको छ । योजनाले ६१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा रू. ४६ करोड लगानी गरेको छ । योजनाको योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड रहेको छ ।